Dhaawaca R/Wasaare Ku Xigeenka oo Dibadda loo Qaaday iyo C/qaadir Cali Cumar oo Xaaladiisa Laga Dayrinayo.
in Wararka by Super Admin
Waxaa sii kordha khasaarihii ka dhashay qaraxyo xooggan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo lala eegtay mas'uuliyiin katirsa DF-ka ee gumeystaha la shaqeysa.
Wararka qaar ayaa sheegaya in R/wasaare ku xigeenka Max’med Cumar Carte Qaalib loola cararay isbitaal kuyaal wadanka Sacuudiga kadib markii xaaladdiisa caafimaad ay xumaatay halka warar kale ay sheegayaan in isbitaal dalka Turkiga kuyaal loo qaaday.
Mas’uul katirsan DF-ka ayaa warbaahinta u sheegay in R/wasaare ku xigeenku uu dhaawacyo culus ka qabo wajiga iyo lugaha islamarkaana wax looga qaban waayay isbitaalka Digfeer ee dowladda Turkiga gacanta ku heyso.
Dhinaca kale waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee C/qaadir Cali Cumar oo horay usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha dowladda Federaalka,dhimashada ayaa gaartay 35 qof oo badan askar iyo saraakiil muhiim ah oo maamulka Xasan Sheekh katirsan.
Weerar Habeen dheelmad ah oo lagu qaaday saldhigga ciidanka Itoobiya ee deegaanka Halgan.
Guddoomiye ku xigeenka deegaanka Ceelasha Biyaha oo la dhaawacay iyo gaarigiisi oo Al Shabaab ugacan galay.